Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Febroary 2019 à 05:03
2 949 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Febroary 2019 à 11:10 (hanova)
(Pejy momba ny fiteny)
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Febroary 2019 à 05:03 (hanova) (esory)
Ny '''[[ova-matoanteny]]''' dia endriky ny [[matoanteny]] izay sady afaka mitana ny anjara asan'ny matoanteny sy ny anjara asan'ny [[mpamari-toetra]]. Ao amin'ny fiteny sasany misy an'io endri-matoanteny io dia misy karazany roa ny ova-matoanteny dia ilay atao hoe ova-matoanteny mañano sy ny ova-matoanteny anoina. Ao amin'ny fiteny sasany koa dia ampiasaina miaraka amin'ny [[matoanteny mpanampy]] ny ova-matoanteny anoina mba hahazoana ny [[fiendrika]] anoina mifandraika amin'ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano. Ao amin'ny fiteny sasany koa dia ampiasaina miaraka amin'ny [[matoanteny andry]] ny ova-matoanteny mba hahaoana ny [[Filazam-potoana (fitsipiteny)|filazam-potoana]] na/sy ny [[Fanehoan-javatra (fitsipiteny)|fanehoan-javatra]] sasany. Tsy ahitana io endri-matoanteny io ny fiteny malagasy.
== Ova-matoanteny ao amin'ny fiteny frantsay ==▼
Ny ova-matoanteny mañano ao amin'ny fiteny frantsay dia miafara amin'ny -''ant'' fa ny ova-matoanteny anoina kosa dia manana endrika isankarazany arakaraka ny matoanteny.▼
=== Filazam-potoana sy fanehoan-javatra ===
Ova-matoanteny manano: ''marchant'', ''parlant'', ''mangeant''.
Ova-matoanteny anoina: ''marché'', ''parlé'', ''mangé''.
▲Ny ova-matoanteny mañanoankehitriny ao amin'ny [[Fiteny anglisy|fiteny frantsayanglisy]] dia miafara amin'ny -''anting'' (ohatra: ''walking'', ''speaking'', ''eating'') fa ny ova-matoanteny anoinalasa kosa dia manana endrika isankarazany arakaraka ny matoanteny (ohatra: ''walked'', ''spoken'', ''eaten'').
== Ova-matoanteny ao amin'ny fiteny anglisy ==
▲Ny ova-matoanteny mañano ao amin'ny fiteny anglisy dia miafara amin'ny -''ing'' fa ny ova-matoanteny anoina kosa dia manana endrika isankarazany arakaraka ny matoanteny.
==== Ova-matoanteny manano:enti-mamorona ''walking'', ''speaking'',endri-pilazam-potoana ''eating''.====
Ao amin'ny fiteny frantsay dia ampiasaina miaraka amin'ny [[Matoanteny mpanampy|matoanteny mpanampy]] ''avoir'' (na ''être'') ny ova-matoanteny lasa mba hahazoana ireo filazam-potoana amin'ny [[Fanehoan-javatra efa sy tsy efa|fanehoan-javatra efa]] toy ny lasa tambatra (frantsay: ''passé composé'') sy ny lasan'ny lasa (frantsay: ''plus-que-parfait'') sns.
Ova-matoanteny anoina: ''walked'', ''spoken'', ''eaten''.
▲=== Ova-matoanteny aosy amin'ny fiteny frantsayfiendrika ===
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/966285"